Igbo, John: Lesson 127 - Pita kwenyesiri ike n'ozi nke ìgwè atụrụ ahụ (Jọn 21:15-19) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 127 (Miraculous catch of fishes; Peter confirmed in the service of the flock)
NKEBI NKE 4 - MGBEGHỊ ỤBỤKWU NDỊ ỌHỤRỤ (Jọn 18:1 - 21:25)
B - MGBE MMADỤ NA NKWA NKE KRAỊST (Jọn 20:1 - 21:25)
5. Jizọs pụtara n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ (Jọn 21:1-25)
a) Azu azụ nke ọrụ ebube (Jọn 21:1-14)
7 Ya mere onye nēso uzọ-Ya Jisus huru n'anya siri Pita, Ọ bu Onye-nwe-ayi. Ya mere mb͕e Saimon Pita nuru na ọ bu Onye-nwe-ayi, o we yikwasi ya uwe-ya; n'ihi na ọ b͕a ọtọ, we tubà onwe-ya n'oké osimiri. 8 Ma ndi nēso uzọ-Ya biara n'ub͕ọ ntà, (n'ihi na ha anọghi n'ebe di anya, ma ha bu ihe ra ka ọgu cubit abua na iri).
Onye na-ezisa ozi ọma ghọtara na nnukwu azụ a abụghị ihe kpatara ya. Ọ nọ n'ụgbọ mmiri, ma chọpụta na nwoke ahụ nọ n'ụsọ mmiri abụghị onye ọzọ karịa Jizọs, ya onwe ya. Jọn ekwughị aha Jizọs, ma jiri nkwanye ùgwù kwuo, "Ọ bụ Onyenwe anyị!"
Pita a na - atụ egwu ka ọ na - echeta na Kraịst na - akụzi ihe nke ugboro abụọ site na ịkụ azụ. Ọ gara maka uwe ya ma tinye ha, ọ chọghị ịbịakwute Onyenwe ya gba ọtọ. O wee banye n'ime mmiri ma saa mmiri n'ebe Onyenwe anyị nọ. N'ihi ya, ọ hapụrụ ụgbọ mmiri ahụ, ndị enyi ya na azụ ọhụrụ. O chefuru ihe nile, n'ihi na obi ya choputara Jizos.
Jọn nọrọ n'ụgbọ mmiri ahụ, ọ bụ ezie na ịhụnanya ya dịka Pita. Ya mere, nwa okorobịa a na ndị ọrụ ibe ya ji ọsọ gbaga n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ihe dị ka mita 100. N'ikpeazụ, ha rutere n'ikpere mmiri iji lekọta azụ dị ukwuu.
9 Ya mere, mgbe ha pụtara n'ala ahụ, ha hụrụ ọkụ icheku ọkụ n'ebe ahụ, na azụ dị n'elu ya na achịcha. 10 Jizos we si ha, Weta ufọdu nime azù ahu unu jideworo. 11 Saimon Pita we rigo, dọba ub͕u ahu n'ala, juputa azù uku, ọgu isi na iri na atọ. na ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị, ụgbụ ahụ adịghị adọwa.
Mgbe ndị na-eso ụzọ bịarutere n'ikpere mmiri ahụ, ha hụrụ ọkụ ọkụ na azụ dị n'elu. Ya mere, olee ebe ọkụ, azụ na achịcha ahụ dị? O wee kpọọ ha site n'ebe dị anya site na otu narị mita, n'ihi na ha enweghị ihe ha ga-eri. Mgbe ha rutere, ha chọpụtara na a na-azụ azụ ahụ, ọ gbara ha ume iri nri. Ọ bụ Onyenwe anyị na onye ọbịa n'otu oge ahụ. O ji obiọma nye ha òkè n'ịkwadebe nri. Ọ na-enye anyị ohere ikere òkè na ọrụ ya na ihe ndị ahụ. Ọ bụrụ na ndị na-eso ụzọ egeghị ndụmọdụ ya, ha agaraghị enweta ihe ọ bụla. Ma lee, ọ na-akpọ ha òkù ka ha rie nri. N'ụzọ dị ịtụnanya, Onyenwe anyị nke na-adịghị mkpa nri ụwa, na-ehulata ala iji soro ha kerịta nri ahụ ka ha wee nwee ọmịiko.
Ọnụ ọgụgụ 153 azụ na-ezo aka, dịka ọdịnala oge ochie si dị, ọnụ ọgụgụ ụdị azụ ndị a maara n'oge ahụ. Ọ dị ka à ga-asị na Jizọs na-asị, "Unu azụla naanị otu ụdị mmadụ, ma bịa na nhọrọ nke mba niile." A na-agwa mmadụ niile ka ha banye ndụ Chineke. Dịka ụgbụ ahụ adịghị adaba na nrụgide, otú ahụ ka Chọọchị agaghị agbaji ma ọ bụ kwụsị ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ, ọ bụrụgodị na ụfọdụ n'ime ndị òtù ya kwesịrị ịnọgide na-achọ ọdịmma onwe ha nanị na enweghị ịhụnanya. Ezigbo Chọọchị ga - aghọ nke ya na nke dị mkpa.
12 Jizos si ha, Bianu rie nri-ututu. Ọ dighi onye ọ bula nime ndi nēso uzọ-Ya puru iju Ya ase, si, Gì onwe-gi bu Onye? 13 Jizos we bia, were ob͕e achicha ahu nye ha, nye azù ahu. Ma nka bu ub͕ò atọ emere ka Jizos puta ìhè nye ndi nēso uzọ-Ya, mb͕e emesiri ka O si na ndi nwuru anwu bilie.
Jizọs chịkọtara ndị na-eso ụzọ ya ọkụ nke ịhụnanya ya. Ọ dịghị onye ọ bụla kwụsịrị ikwu okwu, n'ihi na mmadụ niile maara na ọbịbịa a bụ Onyenwe anyị n'onwe ya. Ha chọsiri ike ijide ya, ma egwu na egwu juru ha. Jizos mebiri ogbi ma gọzie ha ka o malitere ikesa nri. O jiri ya gbaghara ha ma mee ka ha dị ọhụrụ. Ndị niile na-eso ụzọ na-ebi na mgbaghara nke Onyenwe ha mgbe niile; na-enweghị ikwesị ntụkwasị obi nye ọgbụgba ndụ ahụ, ha ga-ala n'iyi. Ha adịghị atụkwasị obi ma ọ bụ nwee olileanya. Ọ baghị ha mba, ma jiri ike ọrụ ebube ya wusie ha ike. N'agbanyeghị nke ahụ, Jizọs na Chineke chọrọ ka ị kesaa ozi ọma ahụ n'agbanyeghị mmehie gị na nwayọọ nwayọọ. Nke a bụ ụkpụrụ Jizọs na-esote n'ịrụ ọrụ ebube mgbe Mbilite n'Ọnwụ gasịrị.
b) Pita kwenyesiri ike n'ozi nke ìgwè atụrụ ahụ (Jọn 21:15-19)
15 Ya mere, mgbe ha risịrị nri ụtụtụ, Jizọs sịrị Saịmọn Pita: "Saịmọn, nwa Jona, ị hụrụ m n'anya karịa ndị a?" O wee sị ya: "Ee, Onyenwe anyị; ị maara na m hụrụ gị n'anya nke ukwuu. "Ọ sịrị ya," Na-azụ ụmụ atụrụ m."
Site n'okwu nke udo ya, Jizọs gbaghaara ndị na-eso ụzọ ya mmehie ha na nkwenye Pita na mbido mbụ ya. Ma, ọjụjụ mkpa Pita dị mkpa bụ ịgwọ ọrịa. Obiọma ya pụtara n'okwu Onyenwe anyị, onye na-enyocha obi. O kwughị okwu banyere ịjụ ya iji nye ya ohere maka nyocha onwe onye na nghọta onwe onye. Ọ kpọrọ Pita site na aha mbụ ya, bụ Saịmọn nwa Jona, maka ịlaghachi n'ụzọ ochie ya.
N'otu aka ahụ, Jizọs na - ajụ gị taa, "Ị hụrụ m n'anya? Ị na - edebe okwu m ma tụkwasị nkwa m obi? Ị ghọtala ihe bụ eziokwu m ma bịaruo nso? I sonyela n'ọkwá m ma hapụ ihe onwunwe, oge na ume maka m? Ihe ndị ị na-eche mgbe niile ka ị bụ otu onye? "Ị na-akwanyere m ùgwù?"
Jizos we si Pita, Ì hurum n'anya karia ndia? Pita azaghi ya, "Ee e, Onyenwe anyi, adighi m nma karia ndi ozo, achoro m gi." Pita ka nwere obi ike ma zaa ee, ma mechie ịhụnanya ya site n'iji okwu Grik maka ịhụnanya, ọ bụghị ịhụnanya sitere na mmụọ nke sitere na Mmụọ Nsọ ma nwee obi ike na okwukwe.
Abaraghị Pita mba n'ihi enweghị ike ya, ma Onyenwe anyị nyere ya iwu ka o gosipụta ịhụnanya ya site n'ilekọta ụmụazụ ya. Jizọs nyere onye a na-akụda mmụọ ọzọ aka ilekọta ụmụ ya n'okwukwe. Nwa Atụrụ Chineke zụrụ ụmụ atụrụ ya. Ị dị njikere ijere ndị dị otú ahụ ozi, ịnagide ha, na-edu ha n'atụghị egwu, ma na-echere ka ha na-eto eto? Ka ị na-atụ anya ihe karịrị ha karịa ka ha nwere ike idi? Ka ị hapụrụ ha ka ha si n'ìgwè ewu na atụrụ pụọ ma belata? Jizos gwara Jizos Pita nke mb la ichota ndi ah no n'okwukwe.
16 O wee sị ya ọzọ nke ugboro abụọ: "Saịmọn, nwa Jona, ị hụrụ m n'anya?" Ọ sịrị ya: "Ee, Onyenwe anyị; ị maara na m hụrụ gị n'anya nke ukwuu. "Ọ sịrị ya," Na-atụrụ atụrụ m."
Jizos ekweghi ka Pita ghara ighota dika okwu si, "I zaghm ngwa ngwa mgbe i siri, 'Ahuhu gi n'anya'? ‖ O bu na ihu gi n'anya abughi obi gi n'anya ma o bu n'eme ezi obi?
Ajụjụ ahụ kpaliri obi Pita, bụ onye ji obi umeala zaa, sị, "Onyenwe anyị, ị maara ihe niile, ị maara ebe ike m na ike m dị, ị hụghị ịhụnanya m n'anya na ị hụrụ gị n'anya ma dị njikere inye ndụ m maka gị. ga-ada ada ọzọ: ma ịhụnanya gị emeela ka ịhụnanya na-adịghị agwụ agwụ dị n'ime m."
Jizos ekwuputaghi ihe Pita kwuru, kama o siri, "dika gi onwe-gi huru m n'anya, ndi mmadu tozuru oke na Church m. Na-azụ atụrụ m n'ubu gị, ike gwụrụ gị?"
17 O wee sị ya nke ugboro atọ, "Saịmọn, nwa Jona, ị hụrụ m n'anya?" Pita wutere ya n'ihi na ọ jụrụ ya nke ugboro atọ, sị: "Ị hụrụ m n'anya?" Ọ sịrị ya: Onyenwe anyị, ị maara ihe niile. Ị mara na m hụrụ gị n'anya. "Jizọs sịrị ya," Na-azụ atụrụ m.
Pita gọnahụrụ Onyenwe ya ugboro atọ, ya mere Jizọs kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ya ugboro atọ wee nyochaa ezi ịhụnanya ya. O mesiri ike mkpa nke ima Chineke nke sitere na Mo Nso, dika Pita gaje ichota nime onwe ya: O natagh ya rue mgbe Mo Nso dakwasiri ya na Pentikọst. Ọ nọgidere na-ajụ, sị, "Ọ bụ na ị ga-agbakwunye m karịa mmekọrịta ọ bụla mmadụ, ruo n'ókè ị ga-enye ndụ gị maka nzọpụta ụwa?" Oge nke atọ, Pita zara n 'mwute na ihere, ma kwukwara na Onyenwe anyị maara obi ya.
Pita kwuputara na Jisos bu ihe kwesiri ikwuputa ugha ato ya na mbu, na Kraist mara ihe nile. Ya mere, Pita kpọrọ ya ezi Chineke, onye maara ihe dị n'ime obi mmadụ. Nke ahụ bụ ọrụ ọzụzụ pastoral, nyere Pita - ilekọta atụrụ.
Ị bụ onye pastọ na-eche ìgwè atụrụ Chineke nche? Ị na-ahụ anụ ọhịa wolves na mmụọ ọjọọ na-eru nso? Cheta, anyị niile bụ ndị mmehie, ọ bụghị ndị kwesiri ka a sọpụrụ ha site n'ịzụ atụrụ nke ndị Chineke, ma ọ bụghị site na obe. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ndị ọzụzụ atụrụ chọrọ mgbaghara kwa ụbọchị karịa atụrụ ahụ; ha na-eleghara ọrụ ha bụ isi anya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ị bụ Onye Ọzụzụ Atụrụ Ukwu ahụ. Ị kpọrọ m ka m bụrụ onye ọzụzụ atụrụ, nke a anaghị m eru. Ana m eso gị wee ghara ịda. I mewo ka aturu nke ebere-Gi nyem. M na-enye gị ha, na-arịọ gị ka ị na-elekọta ha, inye ha ndu ebighi ebi, na-edebe ha n'aka gị; ka onye ọ bula ghara wepu ha. Na-edo ha nsọ ma nye anyị ntachi obi, ịdị umeala n'obi, ntụkwasị obi, okwukwe na olile anya ka e wee guzosie ike n'ịhụnanya gị. Ị gaghị ahapụ m, kama ị hụrụ m n'anya nke ukwuu.
Gịnị kpaliri gị na mkparịta ụka n'etiti Jizọs na Pita?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:59 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)